औंलाबाट कसरी सेक्सको आनन्द हुन्छ ? - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / कामशास्त्र / औंलाबाट कसरी सेक्सको आनन्द हुन्छ ?
खबरडेक्स, १ फागुन ।
सेक्स अर्थात् यौनसम्पर्क गर्नु भन्नाले धेरैजसोले योनि-लिङ्ग मैथुनलाई सम्झन्छन् । यस्तो यौनसम्पर्क योनि-लिङ्ग मात्र नभै मुख-मैथुन वा गुदा-मैथुन पनि हुन सक्छ । योनिमा औंला पसाउनु भनेको पक्कै नै यौन क्रियाकलाप हो । यसलाई यौनसम्पर्ककै रूपमा परिभाषित गर्न भने नमिल्ला । बरु यसलाई हस्तमैथुन भन्न सकिन्छ । तपाईंलाई थाहै होला, आफूले आफ्नै यौनाङ्ग वा यौन संवेदनशील अङ्ग चलाएर, घर्षण गरेर वा दबाब दिएर आनन्द प्राप्त गर्ने क्रियाकलाप नै हस्तमैथुन हो ।
महिलाले विभिन्न किसिमले हस्तमैथुन गर्छन् । भगांकुर चलाउनु वा घर्षण गर्नु हस्तमैथुनको एउटा प्रचलित विधि हो । भगांकुर करिब ९० प्रतिशत महिलामा यौन संवेदनशीलताको केन्द्रका रूपमा रहेको हुन्छ । आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुरा वा तरिकाले यसलाई चलाउन सकिन्छ वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्ने जस्ता अनेक उपाय गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अर्को प्रमुख उपाय योनिमा औंला वा लिङ्ग आकारको वस्तु वा अन्य केही पसाउनु हो । यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनुपर्छ र यौन उत्तेजना हुँदा यो स्वभाविक रूपमै हुन्छ । त्यस्तो नभएको स्थितिमा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्न बिर्सनु हुँदैन । यस्तो पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
औंला पसाउँदा योनिमा आफूलाई बढी आनन्द आउने स्थान खोज्न सकिन्छ । भगांकुर होस वा योनि, हस्तमैथुनमा औंलाको प्रयोग नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । औंला बहुउपयोगी हुने भएकाले नै चाहेअनुरूप दबाब, गति, एवं शैलीमा गर्न सकिन्छ, जसले आनन्द वृद्धि गर्छ । त्यसबाहेक महिलाका अन्य अङ्गहरूको स्पर्श, मर्दन वा सुमसुम्याई यौन आनन्द पाउने कुरामा सहायक नै हुन्छन्, तर अचेल यसरी यौन आनन्द लिने क्रममा महिलाहरूले यौन प्रसाधन वा वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपयले पुरुषको लिङ्ग आकारको कृत्रिम वा प्राकृतिक वस्तु पनि प्रयोग गर्छन् । अंग्रेजीमा vibrators (भाइबे्रटर) भनिने यौन प्रसाधन विभिन्न किसिमका आकार-प्रकारमा उपलब्ध छन् ।